5 Arin Oo Muujinaya In Aad Dhax Fadhiso Waqti Lumis | Xaqiiqonews
5 Arin Oo Muujinaya In Aad Dhax Fadhiso Waqti Lumis
Nolasha waa qaali dhamaanteen waxa aan heysanaa “hal rikooro”, sidaasi oo ay tahay dad badan baa waqti lumis ku dhameysta nolashooda halkii ay bixin lahaayeen juhdiga ugu badan si ugu faa’ideystaan waqtigooda.
Dhalinyarada wa ay ceebeysanyihiin — waxaan ku jirnaa waqtigeena ugu fiican nolasheena, Hadii ay jiri laheyd waqti ay tahay in beerno geedka nolasheena waa hadda, nasiib-darrase inteena ugu badan sidaas ma sameyno.
Ma tahay dadka Waqtigooda uu iska lumo, halkii ay noolashooda ugu faaideysan lahaayeen, Xaqiiqonews waxa ay Webseetka Medium kaga soo tarjumeysaa qodobo aad u baahantahay in laguu sheego.
1-Dhaqso Kama Soo Toostid
Hadii nus saac ma hal saac aad taataabaneyso taleefonkaada adiga oo wili saaran joodarigii xalay ma ahan wax fiican waxa aad sameyneysid.
Sidoo Kale Aqri..5 Astaan Oo Muujineysa In Biya cabkaada Uu Xad Dhaafyahay
Dadka hadaf ka leh nolasha, kuma daahaan saariirta maxaa yeelay dhaqso in aad toosto waa “qodob weyn”, toositaanka aroorta hore wa marxabeyn cusub oo aad ku soo dhaweyneyso maalin kale, oo u baahan in ay noqoto maalin macno u leh nolashaada
2-Saacado Badan Ayaa Kaga Baxa maalaa yanciga
Waqtiga ayey naga dilaan sababtoo ah waa kuwa naga qosliya/farxiya waqti gaaban. liiska waxyaabahan maalaa yanciga ah waxaa ku jira
Waqtiga ku baxa baraha bulshada
Daawashada muuqaalada ama Tv-ga
ciyaaraha sida Games-ka
Waad u baahantahay in waqti kooban siiso, tusaale hal saac ama laba saac maalin walbo, jooji saacado badan , wixii ka badan saacad waxa ay sheekadu isku badaleysaa “waqti lumis”.
Waa ogtahay saacad walbo oo kaga baxdo maalaa yanci, waxa ay noqoneysaa saacad aan ku soo laaban doonin.
Hadiiba waqtiga kaaga lumo riyo, qorsho iyo in aad ka fikirto mustaqbalka,markaasi kama faa’ideysan waqtigaada.
Horumarka kuma yimaado in aad meel fadhiisato oo aad ka fikirto mustaqbalka, faqri ayaa u dhaxeeya fikirka iyo waxqabadka.
Ka fikir arintan, meel fadhiiso oo ka fikir wax aad niyaada ku jira , si aad u hesho waqti lumis, ama waqtiga qaado oo waxqbad sameey si aad u hesho waxa ay niyadaadu tahay.
4-Hurdo Kaama Soo Dhacdo
Dadka maalinta qabta shaqooyin badan waxa ay dareemaan daal, farqina uma dhaxeeyo hadii shaqadu aheyd mid jireed ama mid maskaxeed, waa arinta keeneysa in qofka uu dareemo baahi xagga sariirta ah.
Dhanka kalase marka aadan maalintaas qaban wax shaqo ah, uma baahnid sariirta, sababtoo tamar badan ayaa kugu aruursan.
5-Waxa aad Ka Walwashaa Waxaa Laga Aaminsanyahay
Dadka Howl-karka ah waqtiba uma haayaan in ay ka fikiraan sida laga aaminsanyahay, waxa ay ku mashquulsanyihiin oo kaliya sidii shaqada looga dhigi lagaa “mid qabsoonta”.
Badalkii aad waqtiga ku lumin laheyd qabashada waxyaabaha dad kale kugu raacsanyihiin, raadso qaab run ah oo aad ku xaqiijin karto hadafka nolashaada, xitaa hadii dunida dhan Kula colowdo.